Tamin’ity herinandro ity tao Israely: taorian’ny fifidianana, fametrahana firaisan-dia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Jolay 2018 3:51 GMT
(Lahatsoratra teny anglisy nivoaka tamin'ny avrily 2006)
Araka ny efa nolazaina mialoha, ny Kadima notarihan'i Ehud Olmert no nahazo ny toerana betsaka indrindra tao amin'ny Knesset (parlemanta) tamin'ny fifidianam-pirenena tamin'ny herinandro farany teo (faran'ny volana marsa 2006), nahazo toerana 29 tamin'ny 120. Lavo ny Likud, notarihan'i Benjamin (Bibi) Netanyahu: toerana 11 monja no azony raha oharina tamin'ny toerana 38 azony tamin'ny fifidianana taona 2003.
Ny antokon'ny Mpiasa, notarihan'i Amir Peretz no taoriana nahazo toerana 19. Manana fitambaran-toerana 48 izany ny Kadima sy ny Mpiasa ary ry zareo no hanangana ny fototry ny governemantan'ny fiarahan-dia. Ankehitriny izany dia mbola mila mpiara-miasa hafa i Olmert mba hanome toerana 13 hafa farafahakeliny mba hanatrarana ny toerana 61 kely indrindra hananganana governemanta iray. Iza ary no hasainy ary karazam-pifanarahana tahaka ny ahoana no ho ataon-dry zareo?
Ireto ambany ireto ny fitetezana ireo hevitra mandeha mandritra izao fitadiavam-pifanarahana hananganana firaisan-dia izao, arahin'ireo lahatsoratra hafa tsy miresaka politika.
Tamin'ny tatitra eo noho eo nataony tamin'ny fifidianana, nataon'i Allison ho ao anaty fotaka ny bilaogera Israeliana – fotoana mahafinaritra. Ilaina vakiana ny bilaoginy amin'ireo fanehoan-kevitra tsara dia tsara (sy matetika mampitokelaka) sy ireo rohy mahavalalanina. Nanatsonga azy manokana i Mark Glaser, mpanao gazety, tao amin'ny lahatsorany hoan'ny MediaShift ao amin'ny tranonkalan'ny PBS. Noankotrihany imbetsaka isan'andro ny bilaoginy nandritra ny herinandro lasa teo nametrahany ireo rohy sy fanehoan-kevitra tamin'ny fizotran'ny fananganana ilay firaisan-dia. Maro dia maro tokoa ireo lahatsoratra mahafinaritra ka tsy hitako hoe iza ny iray na roa rohizina eto. Aleo fotsiny mankao amin'ny bilaoginy sy manopy maso ao – izany no bilaogin'ny mpankasitraka mitovy amin'ny fivarotam-batomamy.
Don Radlauer nanolotra famakafakana lalina amin'ny dikan'ny voka-pifidianana. Vakinteny ilaina ijerena amin'ny fitoniana ny tarehimarika sy izay lazainy amin'ny “hevitra mandresy sy very.” Inona no lazain'ny voka-pifidianana amin'ny fahatsapan'i Isiraely amin'ny fizotram-pandriampahalemana, izay mety ho fisintahana amin'ny faritra bodoina (“disengagement“) sy ny aretina ara-tsosialy – tahaka ny fahantrana sy ny vesatra be loatra mianjady amin'ny fanabeazana? Vakio ny nosoratan'i Don hahitana izany.
Fayrouz namoaka taratasy avy amin'ny namana iray mieritreritra fa tsy nety ny nataon'ireo antokon'ny arabo tany amin'ireo fari-pifidianana isoloany tena, ny Arabo vitsy an'isa ao Israely, ao amin'ny Knesset.
Shai namehy ny fikasana hafahafa nataon'i Amir Peretz tsy handalo an'i Olmert ary miezaka manangana fiarahan-dia avy amin'ireo antoko elatra havanana mba hahatonga azy ho praiminisitra. “Nifanoroka sy (niara-)nandrafitra” i Peretz sy i Olmert avy eo.
Yonatan nandefa fijery mitongilana amin'izay adivarotra masiso mampiavaka ny fananganana firaisan-dia, manondro fa:
Ny lesoka, (araka ny fijeriko) amin'ny rafi-pifidianana no manome varavarana misokatra ho an'ny mpisolotena ny antoko hiady varotra amin'ny toerana parlemantera ka mamela ny vahoaka – sy ny lehilahy/vehivavy izay heverina handrafitra ny fiarahan-dia – ho ao anatin'ny aizina momba ny voka-pifidianana farany amin'ny fifidianana. Tsy manampy ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny demaokrasia izany.
Ra'anana Ramblings manoritsoritra ny fitarihana sakafo ao amin'ny tranombarotra lehibe ao an-toerana misy azy. Koa satria moa efa miha-manatona ny fetin'ny Paska, ny fahasahiranana manjo ny mahantra maro ao Israely no midika fa tsy hahazaka hividy ny sakafon'ny sedera [zanak'ondry herintaona] amin'ny alina voalohany amin'ny fety ry zareo. Nanomboka nanangona sakafo natao fanomezana ny fikambanana maro mba ho atao fanampiana noho izany.
Tao amin'ny bilaogim-bondrona iray One Jerusalem (OJ), Efa tonga amin'ny Toko Fahafito amin'ny tsiarony i Jill izay mitondra ny lohateny hoe, Not Jewish?! What are you doing here? [tsy Jiosy?! Inona no ataonao eto?] Aoanvon'ny Adin'ny helodrano faharoa, nantsoina amin'ny maha-miaramila finadry azy ny sipany, ary tampoka teo no namoahan[ny sipany] ilay fanontaniana. Midika izany fa tsy maintsy atrehin'i Jill ny tarehintsoratra “C” (convertie), satria fantany fa tian'ny sipany raha Jiosy ny zanaky ry zareo. Tsy nieritreritra ny tenany ho mpivavaka kristiana mihitsy izy, saingy nanomboka lasan'eritreritra tampoka ny dikan'ny fivavahana izy.
Ary i Stephanie namoaka lahatsoratra mahafinaritra momba ny fampirantiana iray mpialoha lalana nataon'ireo artista israeliana mpanao graffiti, zavakanto an-dalambe any amin'ny trano fampirantiana zavakanto iray malaza ao afovoan-tanànan'i Manhattan. Jereo ny lahatsoratra navoakany izay mametraka rohy amin'ireo tranonkala tena mahafinaritra amin'ireo artista israeliana sasantsasany tena fano aingam-panahy. (Mihevitra aho fa mampitolagaga ny habak'i Rami Meiri).